Kubhikishe abasebenzi bakamasipala abangotoho | News24
Kubhikishe abasebenzi bakamasipala abangotoho
PHOTO: nokuthula khanyile Abasebenzi akade bebhikisha ngaphandle kwase City Hall ngoLwesithathu olwedlule.
BABHIKISHE ngaphandle kwase-City Hall ngoLwesithathu olwedlule abasebenzi bamasipala abangotoho bekhala ngokuthi bayaxhashazwa futhi abaqashwa ngokugcwele.
“Ungawenzani nje uR1400? Imali ongakwazi ngisho ukuthi uqede inyanga ngayo. Sinemindeni ekufanele siyondle, sifundisa izingane futhi kufanele size emsebenzini asikwazi ukwenza zonke lezinto sisahola amakinati,” kusho omunye umsebenzi.
Labasebenzi bathi abakwazi nokuhlelela ikusasa labo ngoba kungenzeka umasipala angazivuseleli izinkontileka zabo.
Abanye bathe sekuphele iminyaka ebalelwa kwemihlanu bengotoho futhi baholelwa nemali engagculisi.
USihlalo wenyunyana i-Municipal and Allied Trade Union of South Africa (Matusa) uNduduzo Madima uthe umasipala woMsunduzi uphula umthetho njengoba uholela abasebenzi amakinati.
“Akukwazi ukuthi abasebenzi bangaqeda iminyaka emihlanu kuya phezulu bengotoho.
“Akekho umsebenzi ekufanele aqoqe udoti kuze kuphele iminyaka elishumi engaqashiwe ngokuphelele. Abasebenzi baholelwa imali engu R2000 nokuphambene nomthetho njengoba inhlangano eyengamele omasipala iSalga ithi abasebenzi kufanele baholelwe okungenani uR6000 kuya phezulu.”
UMadima uphinde waveza ukuthi umasipala uqamba amanga ngokuthi usuqashe ngokugcwele abasebenzi abangu 100% kulabo akade bengotoho.
“Lokhu kungamapunge ngoba akuzange kuqashwe ngisho u50% wabasebenzi abangotoho. Abasebenzi basagcindezelekile eMsunduzi njengoba bengaphezu kuka 1000 abasabambe njengotoho.
“Labasebenzi abakwazi ngisho ukuthatha ama-leave ngoba abaqashiwe ngokusemthethweni.”
Phakathi kokunye athe bakhala ngako abasebenzi abangotoho abangu 740 abasebenza emawadini nathe kusukela ngonyaka ka 2012 abakaqashwa.